Wuxuu saameeyn wayn ku yeelan heshiiskii caalamiga ee Dublin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle. Foto: Eva Elke/Sveriges Radio
Wuxuu saameeyn wayn ku yeelan heshiiskii caalamiga ee Dublin
Xayiraad lagu soo rogay heshiiskii Dublin
La daabacay fredag 7 november 2014 kl 15.30
Go'aan ay gaartay maxkamadda Yurub ee xuquuqda bani'aadamka ayaa looga cabsi qabaa inuu adkeeyo sidii ay hayadda socdaalka ee dalkan Iswiidhen dib ugu celin lahayd qaxootiga horay u soo maray dalka Talyaaniga. Middaasina ugu wacan tahay iyada oo maxkamadda go'aankeedu ku saleey-san yahay in shakhsi walba arrinkaiisa laga ogaado dawladda talyaanigu iney hab ku habboon u haqab-tirto baahideeda iyo in qooysaska iyo dhallaankoodana loo qaabilo hab ku habboon.
Go'aankan ayaa sabab u noqon kara inay hayadda socdaalka ku adkaato sidii ey ugu tallaab-san lahayd go'aanno dib loogu celineyo qaxootiga dalka Talyaaniga, sida uu sheegay Fredrik Bejer, ahna madaxa laanta shuruucda ee hayadda socdaalka:
- In qooysas iyo dhallaan dib loogu tarxiilo dalka Talyaaniga ayaa loo baahan doonaa dammaanad aad u ballaaran ee shakhsiga iyo habka hufnaanta ee loogu qaabili doono dalka Talyaaniga, sida uu sheegay.
Go'aanka maxkamadda ayaa la xiriira heshiiskii caalamiga ahaa ee Dublin, oo macnihiisu yahay in qaxootigu xaq ugu leeyihiin iney magan-gelyo ka dalban karaan waddanka ugu horreeya oo ey ka soo galaan waddammada xubnaha ka ah EU. Waddammo badan oo Iswiidhen ka mid tahay ayaa illaa iminka dib ugu celin jirey qaxootiga horey u soo marey dalka Talyaaniga iyo Gariigga oo halkaasi faro looga qaaday ama dacwaddooda lagu galey, kuwaasina oo marar badan ah waddammada ugu horreeya ee qaxootigu soo caga-dhigtaan. Hase yeeshee uu go'aanka maxkamaddau gaartay wax ka bedeleyo iminka, qaasatan marka laga hadleyo qoysaska ilmaha wata.
Wixii go'aankan ka horreeyey ayey waddammadu u dhaqmi jireen is-aamin iyo in habka qaabilaadda waddammaadu ahaayeen kuwo lagu kalsoon yahay, sidaa daraadeedna si toos ah dib loogu celin jirey qaxootiga waddankii ugu horreeyey oo ey ka soo galeen waddammada ku bahoobey EU, dalka Talyaaniga oo iminka uu salka ku hayo go'aanka maxkamadda Yurub. Hase yeeshee ay maxkamaddu iminka go'aamisay in cid walba arrinteeda si gaar ah dammaanad loogu helo, maadaama ey ka jiraan daldalloolo badan habka qaabilaadda qaxootiga ee dalka Talyaaniga.
Dacwadda maxkamadda ayaa go'aan ka gaartay qoys ka soo jeeda dalka Afgaanistaan oo lix carruur ah leh, kuwaasina oo markii ugu horreeysey soo caga dhigtaey dalka Talyaaniga, dabadeed uga socdaaley dalka Iswiiserland.
Maxkamadda ayaa siday qabto sheegtay in falka ah in qoyskaa dib loogu celiyo dalka Talyaaniga uu jebineyo xeerka xuquuqda bani'aadamka ee Yurub in shakhsi lagula dhaqmo ama loo qaabilo hab aan ku habbooneyn iyo in qoyska dib loogu celiyo dalka Talyaaniga. Dawladda talyaaniga ayaa marar badan lagu dhaleeceeyey habka aan wanaag-saneyn ee qaabilaadda qaxootiga, qaasatan marka laga hadleyo hooyga. Fredrik Bejer iyo mar kale:
- Go'aanka maxkamadda kadib waxaa dhici doonta inaan xiriir toos ah ee wada-xaajood la yeelano dalka Talyaaniga intii cid dib loogu tarxiilin dalkaa, sida uu sheegay.
Miyaanay hayadaha talyaanigu markaa oran karin oo keliya in aaney nasiib-darro heyn hooy dadyoowgaasi la dejiyo?
- Goolka aan ka duuleeyno ma ahan midkaa ee goolka aan ka duuleeyno wuxuu yahay in dawladda talyaanigu ku howl-gasho sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaa.
Ma laga yaabaa marka inay ka adkaato inuu dalkani qaxooti dib ugu ceiya dalka Talyaaniga?
- Waan arki doonnaa. Waa mid dhici karta inay sidaa u dhacdo, sida uu sheegay maxa laanta shuruucda ee wakaaladda socdaalka Fredrik Bejer oo wareeysi siiyey Susan Palme oo ka howl-gasha laanta idaacadda ee Studio Ett.
Isha /Ekot, Studio Ett